बारबेक्यू बिना के छुट्टीको? आजको संसारमा त्यहाँ बारबेक्यू को प्रकार र प्रकारका, धातु सहित सबै किसिमका बस एक अविश्वसनीय मात्रा हो। यो बावजुद, मूल डिजाइन धेरै सरल छ र वास्तवमा धातु बक्स छ। धेरै मानिसहरू प्रश्न सोध्छन्: "कसरी आफ्नो हातमा एक धातु ग्रिल बनाउने?"। सबै महत्त्वपूर्ण छैन हुनत, तपाईं ग्रिल आफैलाई के वा बस स्टोरमा यसलाई किनेको छ, तिनीहरूलाई स्वादिष्ट बारबेक्यू दिनुहोस्। आफ्नो हात मात्र काम - तर तपाईं marinade देखि कि सबै थाहा र बारबेक्यू फ्रेम मा टाँका संग समाप्त खुसी हुनेछु।
आफ्नो हातले एक धातु ग्रिल कसरी बनाउने? यो धेरै सरल छ। पनि छुट्टी मा जाने वा देश, यो BBQ बनाउन निकटतम लाइन मा सम्भव छ। तपाईं पानाहरू र क्षेत्र आवश्यक हुनेछ। त्यहाँ पनि वेल्डिंग लागि आवश्यकता हुनेछ, तर एक उपलब्ध छैन भने, यो कुरा छैन। बारबेक्यु - उपकरण nepriveredlivyh र सजिलै मार्फत माउन्ट हुन सक्दैन बोल्ट। यसको मुख्य लाभ - यो ओसारपसार र स्थायित्व गर्न सजिलो छ। वफादार भई र यो धेरै वर्ष को लागि तपाईं सेवा गर्नेछन्।
तपाईं कसरी आफ्नो हातमा धातु बाट BBQ बनाउन निर्णय गर्नु अघि, यसको आकार निर्णय गर्नुपर्छ। 4-5 मानिसहरूको सानो कम्पनी को लागि लम्बाइमा बारेमा 500 मिमी को पर्याप्त भवन हुनेछ। यो तयारी गति एक shish Kebab एकदम तथापि, बरस रही गुणस्तर रूपमा कम किनभने, एक BBQ पनि गहिरो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले कसरी आफ्नो हातमा धातु बाट BBQ बनाउन को प्रविधि बारे प्रश्नहरूको निर्माण गर्न शब्द र विस्तृत उत्तर सार्न गरौं। पहिलो, हामी राम्रो पाना धातु एक चयन गर्नुपर्छ। को मोटा इस्पात, राम्रो, यो न्यानो राख्दै समयको लागि जिम्मेवार छ देखि। को खुट्टा को लागि राम्रो कुनामा छ। तपाईं पहिलो चिन्ह पाना धातु, सबै अनावश्यक कटौती गर्नुपर्छ। त्यसपछि चिह्नों को workpiece 90 ° मोड र सम्पूर्ण लम्बाइ भन्दा वेल्डिंग seams लागू गर्नुपर्छ। त्यसपछि फ्रेम समाप्त तल्ला संलग्न छ। एक सम्पूर्ण संरचना जडान लागि पारंपरिक स्क्रू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, लेआउट बारबेक्यू (बारेमा 25-35 मिमी) को प्रत्येक पक्षमा अतिरिक्त अवकास बनाउन आवश्यक छ। यो तपाईं बोल्ट लागि प्वाल बनाउन एक ड्रिल प्रयोग गर्न सक्छन्, धेरै झुकन द्वारा सुनिश्चित छ। तर, यो मामला मा, यो अब हुनेछ। को खुट्टा भविष्यमा निकै बारबेक्यू को यातायात सुविधा हुनेछ, हटाउन सकिने गर्न सकिन्छ।
फ्रेम पछि माउन्ट छेउमा पर्खाल मा केही प्वालहरू गरिन आवश्यक छ। यो coals गर्न हावा को एक गुणस्तर आपूर्ति लागि गरिन्छ। प्वालहरू सिधा तल माथि अवस्थित 30 मिमी को आदेश, को हुनुपर्छ, र दूरी बीच 40-50 मिमी हुनुपर्छ। धातु उत्पादन को फोर्जिंग लागि सामान र उपकरण संग, हामी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जाली brazier। तर, यो विधि समय खपत छ र शिल्प गाँस्न गर्न विशेष कौशल आवश्यक छ। त्यसैले, यो विधि गतिविधि मा व्यावसायिक संलग्नता आवश्यक छ।
पढेपछि तपाईं आफ्नो हात धातु बनेको एक ग्रिल निर्माण गर्न भनेर पक्का गर्न सक्नुहुन्छ सबै यो पहिलो नजर मा लाग्न सक्छ रूपमा रूपमा गाह्रो छ।
220V गर्न एलईडी पट्टी जडान: योजना र वर्णन
कसरी आफ्नै हातले फूल लागि सडक vases बनाउने?
व्यापार विचार: के घरमा गर्न सकिन्छ, एक लाभ बनाउन
Typhoid ज्वरो प्रकारका अवस्थित जो के हो र के उहाँले खतरनाक छ?
कसरी बस र चाँडै एक लोखर्के आकर्षित गर्न?
विषय र दर्शन समारोह
ठूलो विनम्रता - उसिनेर गाढा दूध
ऐतिहासिक शहर को वास्तुकला: विवरण र इतिहास। ऐतिहासिक र आधुनिक शहर को वास्तुकला